ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: "last minute Ko Paw"
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ ရေးပြီ မဟုတ်လား...
May last-minute-Ko-Paw long-last forever! :)
တစုံတခုလုပ်စရာရှိရင် နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့ နောက်ကို ရွှေ့ရွှေ့နေပြီး နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျမှ ကပ်ပြီး လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပါ။..
ပြောရရင် အနော်လည်း အဲလိုပဲ ကိုပေါရေ။
ဟာ- တူနေကြပါရောလား။ ဘလော့ဂါ တွေက..ဒီလိုပဲထင်တယ်။း)
ကိုပေါစာလေးဖတ်ပြီး..ညစ်နေတဲ့ စိတ်တွေ..အပြုံးတခုနဲ့ ထွက်ပေါက်ခန ရသွားတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်...... long-last forever တော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျို့။ ဒီတောင်ကို ကျော်နိုင်ပါတော့မလားတောင် မသိဘူးဗျာ။ (ဟိုဖက်တောင်မှာ....ဘီယာမရှိဘူးကြားလို့း-)
ပန်ဒိုရာ......... အဲဒီတော့ အရင်သွားမိလို့ ဘီလူးစားခံရမယ့် လှည်းသားငါးရာထဲမှာ ကျနော်တို့လို နေ့ရွှေ့ညရွှေ့သမားတွေ မပါတော့ဘူးပေါ့ဗျာ..ဟဲဟဲ။
မကေ....... ပုလင်းတူ ဘလော့ဂ်ဆို့တွေဘဲ။ ဂလောက်တော့ ရှိကြပေမပေါ့။
တော်သေးတာပေါ့ စိတ်ရှည်ပေးတဲ့ ချစ်လေးမဒမ်ပေါရှိလို့။
ခုတောင် ကွန်းမန့်နောက်မှရေးမယ်ဆိုပြီး အချိန်ဆွဲတော့မလို့ ခေါင်းစဉ်ပြန်ကြည့်မိမှ ချရေးလိုက်တာ။ နောက်တခါဆို မရေးဖြစ်ဘူးရယ်။
လုပ်စရာရှိရင် အချိန်မဆွဲဖို့ သာဓကတွေ စာတွေနဲ့ ပညာပေးလည်း မမှုဘဲ ခပ်တည်တည်နေတတ်တာ အကျင့်စွဲနေပြီထင်ပါ့။ ပြင်ပါအုံးမယ် နောက်တော့.....
ကိုပေါရေ last minute လုပ်ရတာအသဲယားလွန်းလို့ အမြဲကြိုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ သူများတွေကိုပါစောင့်ရရင်တော့မထူးပါဘူး။
မဇနိ..... ခေါင်းစဉ်ကယ်ပေလို့နော်။ ဒါတောင် ပြင်ပါဦးမယ် နောက်တော့...တဲ့။ သဘောကျသဗျာ။
ကိုဇနိ..... ရယ်ပါ..ရယ်ပါ။ ရယ်သောသူ ပါးစပ်ညောင်း၏ တဲ့ ကိုဇနိရဲ့။း-) ကွန်မင့်ပေးတာမှာတောင် မဇနိက ဦးစီးဦးဆောင်နော်။ ဒေါ်ဦးယောင်္ကျားကြီးကို သတိရမိတယ်။
မီယာ.... မဒမ်ပေါလည်း အဲသည်လိုဘဲ...အသဲယားတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ဗျ။ ကြားဘူးတယ်မို့လား။ ဘယ်ဘုန်းကြီး ရှေ့က ကြွကြွ၊ ဆွမ်းစားတော့ အတူတူပါပဲကွာ..ဆိုတာ...အဟီး။
မျိုးကျော့ လို နောက်ကျရတဲ့အကြောင်းကို သီချင်းတစ်ပုဒ် လုပ်ဆိုလိုက်ရင်တော့ last minute Ko Paw ကနေ Rapper Myo Kyawt Paw ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသေးသကော.လာမယ့် ၂၀၀၉ စင်္ကာပူ အာရ်အိုင်တီ သင်္ကြန်ပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
MSc. (L. M. logy)
Master of Sonata-Cantata in Last Minutology
comment to Moe Cho Thin
ဘဝတူတွေပါလား.. ချီးပါကာနီးမှ ချီးတွင်းလိုက်ရှာတဲ့ကောင်ချင်းတွေ့နေကြပြီ.
ကမောင်ရင်...ဘာလဲ။ ဘာလို့ ရယ်ချင်ရတာလဲ။ သစ်ရွက်လှုပ်လို့လား။ သစ်ရွက်လှုပ်လို့ ရယ်ရမယ့်အရွယ်လည်း မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့။ ဒါဆိုရင် မောင်သာရစကားနဲ့ပဲ ငှားပြောတော့မယ်။
“လေတိုက်လို့သစ်ရွက်လှုပ်တာ... သစ်ရွက်လှုပ်လို့လေတိုက်တာ”။ ကျနော်ကတော့ “ပြုံးတတ်တယ်..ခေါင်းညိတ်တတ်တယ်”။ ကိုမောင်ရင်လည်း “ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် မကြုံကြိုက်လိုဘူး” လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဟယ်...ပေါရဲလိုက်တာလို့ ထင်တော့မှာဘဲ ဟိ)
မသီတာ.....အတည်ပေါက်နဲ့ နောက်တယ်နော်။ ကျနော့်မှာ ဘာဘွဲ့လည်းလို့ အပြေးအလွှားစဉ်းစားလိုက်ရသေးတယ်။ မသီတာက လက်နဲ့ထိလိုက်တိုင်း ပစ္စည်းပျက်တတ်သူဆိုတော့ မပြင်တတ်တဲ့ ကျနော့်ထက်တော့ အပုံကြီးသာပါပေတယ်ဗျိုး။
မခင်ဦးမေ.... ရတနာရှိရာ ရတနာစု ပေါ့ဗျာ။း-)
Old habit die hard lay
Holiday ရာသီဆိုတော့ မနက်ကပဲ ရုံးမှာ စကားစုပြောနေကြတာ…
ဂျပန်သွားမယ့်သူ တရုတ်သွားမယ့်သူ ဟောင်ကောင်သွားမယ့်သူ… အားလုံးအထုတ်တွေ စပြင်ဆင်နေကြပြီတဲ့… မြန်မာပြည်ပြန်မယ့်သူကိုယ်က အထုတ်ပြင်ဖို့ ဝေး… အခွန်တောင်မဆောင်ရသေး… ရတနာရှိရာ ရတနာစုတော့ သတိမရဘူး… ဟိုဟာလေးပဲ သွားသတိရတယ်… ဂျိူကုတ်ရှိရာ ဂျိုထောင်မလာတဲ့… ဟိဟိ….
တန်ခူး….. ရှိသေးတယ်။ “သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်တွေ့” ဆိုတာလေ။